Ra'isulwasaaraha cusub ee Itoobiya Dr Abiy Axmed ayaa la yimid isbadalo waaweyn 100 maalmood ee uu xilka hayay. - BBC News Somali
Ra'isulwasaaraha cusub ee Itoobiya Dr Abiy Axmed ayaa la yimid isbadalo waaweyn 100 maalmood ee uu xilka hayay.
Isbadalo waaweyn ayaa ka socda dalka Itoobiya tan iyo markii uu xilka la wareegay Ra'isulwasaare Abiy Axmed 100 maalmood ka hor.
Haddaba waxa aan halkan idinkula wadaagaynaa waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee u qabsoomay Ra'isulwasaaraha iyo tallaabooyinkii uu qaaday.
100 maalmood: Muddada uu Abiy xafiiska hayo
2 Abriil 2018, Maalmaha uu
Abiy Axmed wuxuu hor yimid baarlamaanka, waxaana loo dhaariyey inuu noqdo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimoqaraadiga ee federaalka Itoobiya, todobaad ka dib markii loo doortay guddoomiyenimada xisbul-xaakimlka EPRDF. Khudbadiisii ugu horreysay ee 36ka daqiiqo socotay ayuu ku codsaday midnimo, wuxuuna tilmaamay isbeddello uu qaadi doono.
28 Abriil 2018, Maalmaha uu
In yar ka dib markii uu xilka qabtay wuxuu bilaabay inuu socdaal ku maro dawlad goboleedyada, wuxuuna kala hadlay bulshadaarrimaha ayaga khuseeya. Isagoo Hawssa kula hadlayey dadweynaha SNNPR, wuxuu carrabka ku dhuftay in ra'iisul wasaare laga ogolaan karo oo kaliya inuu laba xilli xafiiska joogo, taasoo ah 10 sano.
18 Maajo 2018, Maalmaha uu
Andargachew Tsige oo ah hogaamiye mucaarad ah oo haysta dhalashada Britain, kaasoo dil lagu xukumay ayaa la sii daayey. waxaa lagu helay argagixisonimo, waxaana la xukumay isagoo maqan sannadkii 2009,lugtii uu ku lahaa kooxda mucaaradka ee Ginbot 7. Waxaa lagu martiqaaday maalintii xigtay qasriga madaxtooyada, wuxuuna la kulmay ra'iisul wasaaraha.
2018, Maalmaha uu
4 Juun 2018, Maalmaha uu
43257 2018, Maalmaha uu
7 June 2018, Maalmaha uu
9 June 2018, Maalmaha uu
18 June 2018, Maalmaha uu
23 June 2018, Maalmaha uu
Bam qarxay ayaa dilay 2 qof, waxa lagu tuurey isu soo bax uu Ra'isulwasaaraha joogay magaalada Addis Ababa. Dr Abiy waxa uu sheegay in ujeedku ahaa in lagu haleeyo burburiyo farxadeed ee dadka.
26 June 2018, Maalmaha uu
5 July 2018, Maalmaha uu
8 July 2018, Maalmaha uu
Ra'isulwasaare Abiy Axmed ayaa u safray Casmara, Eritrea, waxaana aad usoo dhaweeyay madaxweynaha Eritrea Isaias Aferworki iyo kumanaan reer Eritrea ah. Waa booqashadii koowaad muddo 20 sano ah, waxayna qeyb ka tahay biloowga bog cusub oo nabadeed.
La caleemo saaray
Muddada uu ra'iisul wasaaraha xafiiska haynayo
Sii deynta Andargachew Tsige
Safarkiisi ugu horreeyey ee Afrika ka baxsan
Xaaladda degdegta ah oo la qaaday
Isku shaandheyn saraakiisha xoogga iyo kuwa amniga
Uganda iyo Masar
Dowladda iyo argagixisada
Bam ka qarxay meel isu soo bax ah
Waftiga Eritrea ee Itoobiya gaaray.
Argagixiso ma jirto
Casmara ayuu gaaray
<< kii hore
kan xiga >>
Fikaradda : William Muli. Naqshadda : Willie Wachira. Cilmi Baarista : Bahda Geeska Africa
Getty Images, Fitsum Arega Twitter, Fana broadcasting Facebook Page, EBC Facebook Page, Yidnekew Abreha, HRW,Fitsum Arega
Xuquuqda sawirrada : Getty Images, Fitsum Arega Twitter, Fana broadcasting Facebook Page, EBC Facebook Page, Yidnekew Abreha, HRW,Fitsum Arega